Dib u furista Mareykanka: Tallaal buuxa iyo baaritaan taban oo COVID-19 ah ayaa loo baahan yahay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Dib u furista Mareykanka: Tallaal buuxa iyo baaritaan taban oo COVID-19 ah ayaa loo baahan yahay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Dib u furista Mareykanka: Tallaal buuxa iyo baaritaan taban oo COVID-19 ah ayaa loo baahan yahay.
Maamulka Biden wuxuu ku dhawaaqay in Mareykanku "ka guuri doono xayiraadaha waddan-ka-wadan ee horay loogu dabaqay" oo uu qaato siyaasad "kaas oo ugu horreyntii ku tiirsan tallaalka si loo hormariyo dib-u-soo-kabashada safarka hawada caalamiga ah" ee Mareykanka.
Xayiraadaha safarka Mareykanka, oo la soo rogay Maarso 2020 oo uu cusbooneysiiyay Biden horaantii sanadkan, ayaa la qaadi doonaa laba toddobaad gudahood.
Xayiraadaha baxaya waxaa lagu beddeli doonaa xannibaadyo cusub oo ku lug leh xaaladda tallaalka iyo raadinta xiriirka.
Tallaalada la aqbalay ayaa noqon doona kaliya kuwa la ansixiyay ama oggolaaday Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka ama Ururka Caafimaadka Adduunka.
Aqalka Cad ayaa ku dhawaaqay in booqdayaasha caalamiga ah ee soo galaya US Marka dalka dib loo furo 8-da Noofambar waa inay soo bandhigtaa caddaynta tallaalka buuxa iyo natiijooyinka taban ee baaritaanka COVID-19 marka la yimaado.
Bayaan uu soo saaray maanta, maamulka Biden wuxuu ku dhawaaqay in United States "inay ka guuraan xayiraadaha wadan-ka-wadan ee horey loogu dabaqay" oo ay qaataan siyaasad "taas oo ugu horraysa ku tiirsan tallaalka si loo hormariyo dib-u-soo-kabashada safarka hawada caalamiga ah" ee Maraykanka.
Xayiraadaha safarka ee US COVID-19, oo la dhaqan galiyay Maarso 2020 lana cusbooneysiiyay horraantii sanadkan, ayaa la qaadi doonaa laba toddobaad gudahood, laakiin waxaa lagu beddeli doonaa xayiraado cusub oo ku lug leh heerka tallaalka iyo raadinta xiriirka.